राष्ट्रपति सीको उच्च सुरक्षा : सडकदेखि अग्ला घरका छतमा सेना ! | नेपालबहस
राष्ट्रपति सीको उच्च सुरक्षा : सडकदेखि अग्ला घरका छतमा सेना !
२५ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंमा शनिबार बिहानैदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालनपारिएको छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरी राजधानी काठमाडौंको सडकदेखि आकाशको सुरक्षा गर्न घरको छतमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति सीको उच्च सुरक्षा गर्दै सडकदेखि अग्ला घरका छतमा पनि अत्याधुनिक हतियारसहितका सेना खटाइएको छ । घरका छतमा खटिएका सेनाले अत्याधुनिक दुरविन प्रयोग गरी निगरानी गर्दै आएका छन् । सीलाई सुरक्षा दिन काठमाडौंको सडकमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गरिएको छ ।
सुरक्षाका लागि करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी काठमाडौंमा परिचालन गरिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सवारी रुट, चिनियाँ राष्ट्रपति सी बस्ने सोल्टी होटल तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा खटाइएको छ ।
सी काठमाडौं आउनुअघि नै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको कमाण्डो टोली नेपाल आएर सुक्ष्म निगरानी गर्दै आएको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेना सादा पोशाकमा परिचालित हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो लेख‘नेपालमा स्वागत छ ! राष्ट्रपति सी चिनफिङ !’
अर्को लेखचीनका राष्ट्रपति सीको सडकमा स्वागतको भव्य तयारी
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल र भारत भ्रमणभित्रका विशेषता
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत